सिल्टल युनिभर्सन इन्टर्बुलमा एक ईमेल सूची र अनलाइन मार्केटिङको साथ सुरू गर्न
इमेल सूची प्राप्त गर्न तपाईंलाई पैसा बनाउन सुरु गर्न अनुमति दिन्छ। सबैयो एक इमेल हो जुन केहि नयाँ उत्पादनको लागि तपाईंले प्रचार गरिरहनुभएको छ, र तपाइँसँग हुन सक्नुहुनेछठूलो payday, तर केवल यदि तपाईं ठूलो सूची निर्माण गर्न व्यवस्थित छ भने। Semalt डिजिटल सेवा विशेषज्ञ,माइकल ब्राउनले कसरी अनलाइन मार्केटिंगको साथ सुरु गर्ने बारे उपयोगी सुझावहरू साझेदारी गर्दछ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले नयाँ बारेमा जानकारी पाउनुभयोउत्पादन, तपाईले मूल्यवान र सहयोगी खोज्नुभएको छ। एक साधारण इमेल एक साथ 10,000 मान्छे को सूचीमा पठाइयो5% को कुराकानी दर 500 बिक्री हुनेछ। मानौं कि तपाइँ प्रति बिक्री $ 10 कमीशन कमाउँदै हुनुहुन्छ,जो एक धेरै रूढिवादी अनुमान हो, यसले तपाईंलाई एक दिनमा $ 5,000 कमाउँदछ, भन्दा कमको लागिएक घन्टाको काम इमेल सूची निर्माण गर्ने बारे अझै पनि अनिश्चित छ?
स्वाभाविक रूपले, 10,000 को ई-मेल सूची एक मध्यम साइज होसूची, निर्माण गर्न केही महिना लाग्न सक्नेछ, त्यसैले तपाईलाई आजको काम सुरु गर्न, कल होइन। Theछिटो तपाईं आफ्नो सूची निर्माण सुरु गर्न, छिटो तपाईं फिर्ता बस्न पाउनुहुनेछ, एक नयाँ इमेलको बारेमा पठाउनुहोस्उत्पादन, र त्यस घण्टामा तपाईले प्राय: एक महिनामा कमाउनु हुन्छ।
एक ईमेल सूची को लाभ (1 9)
प्रत्यक्ष विपणन गर्न को लागी लागत प्रभावीता
क्लिकहरू विश्लेषण गर्न क्षमतार अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू जुन तपाईंको ईमेल रणनीतिमा ट्वीक गर्न मद्दत गर्दछ
प्राधिकरण भवन र विश्वास को समयमा मूल्य को पेशकश गरेर
उच्च परिवर्तनको कारणतपाईंको ईमेल सूचीसँग चलिरहेको संचारको निर्माण गर्न
ईमेल निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागहरू मध्ये एकसूचीले तपाइँको ग्राहकहरू राख्दछ। यो सामान्य पाठकहरूका लागि उनीहरूको नि: शुल्क "प्रोत्साहन" को सदस्यता लिन धेरै सामान्य छर त्यसपछि आफैलाई आफ्नो इमेल सूची पछि हटाउनुहोस्। तपाईंले तिनीहरूको लागि मूल्य प्रदान गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छलगातार तपाईंको ईमेल एक्सचेन्ज भर, अन्यथा, तपाईंको कडा काम र भविष्य मुनाफा को अलविदा भन्नुहोस ..
प्रभावी इमेल मार्केटिंग अभियानहरु को बारे मा सबै होसही दृष्टिकोण। दैनिक ईमेल मार्फत सबै इमेलहरूको बारेमा सोच्नुहोस् र किन तिनीहरूमध्ये केहिले तपाईंलाई पक्र्याउँछध्यान र अरूलाई हटाइयो। त्यहाँ ग्राहकहरू रुचि र भरोसा प्राप्त गर्न एक विज्ञान होसरल इमेल। यो "स्प्याम" तपाईंले प्राप्त गर्नुहुने हो र यसको बारेमा थप जानकारी पाउनका लागि क्लिक गर्ने इमेलहरू बीचमा फरक छ।
मुख्य बिन्दुलाई सम्झँदा तपाईंको सूची निर्माण गर्दा (1 9)
तपाईंको लक्षित आला
मा विशेषज्ञता र मूल्य प्रदान गरेर विश्वास सिर्जना गर्नुहोस्
उनीहरूले आफ्ना भावनाहरू तिरस्कार गर्छन्कथाहरू जुन पाठकहरूलाई आकर्षक लगाउँछन्
तपाईंको कथा कथालाई वास्तविक तर्कको रूपमा जगेडा गर्नुहोस्प्रशंसापत्र तिनीहरूलाई अझ बढी रुचि राख्ने
यो तपाईंको सीधा ग्राहकहरु लाई बोल्ने महत्वपूर्ण छ।तपाईं जान्नुहुन्छ कि तिनीहरूले किन साइन अप गरे, त्यसोभए उनीहरूलाई बोल्छन् जसले उनीहरूको ध्यान पाउनेछ। कुनै पनि इमेल मनपर्दैनकि असाधारण अंकको बारेमा कुरा गर्दछ, त्यसैले छिटो र सिधा आफ्नो बिन्दुमा जानुहोस्। त्यसपछि तिनीहरूलाई एउटा कथा बताउनुहोस् जुन तिनीहरूगर्न सकिन्छ। यसले भावनाहरूलाई सतहमा आउन मद्दत गर्नेछ, जुन तपाईले खोज्दै हुनुहुन्छ।
इमेल सूची निर्माण गर्ने उत्तम तरिका एक प्रयोग गर्न होसम्मानित स्वत: जवाफ दिनुहोस्। तपाईं भविष्यमा हप्ता हप्तामा स्वचालित इमेलहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, र एक चोटि गरेपछि,तपाईंलाई केहि गर्न को लागी छैन। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, तर अबरबाहेक सबै भन्दा बढी मानिन्छ। त्यहाँनि: शुल्क वा सस्ता विकल्प फेला पार्न प्रोत्साहन हो तर यसको समस्या यो हो कि तपाईंको ईमेल सीमित हुन सक्छप्रति हप्तामा, वा तिनीहरू तपाइँको ग्राहकको स्प्याम बक्समा समाप्त हुनेछ।
इमेल विषय रेखाहरू अपरिहार्य हुनुपर्छर सबैको जिज्ञासाको राम्रो प्राप्त गर्नुहोस्। कथाकारहरू तिनीहरूको दिमागहरू खिच्न र उनीहरूको विषयवस्तुमा प्राप्त गर्न आवश्यक छको सोच। प्रतिलिपि अधिकारको बारेमा अझ बढी सिक्न तपाईंलाई बहुमूल्य ईमेलहरू उत्पादन गर्न मद्दत गर्नेछ जुन तपाईंको ग्राहकहरू पढ्न र चाहनु हुन्छ।
तपाइँको ई-मेल सूचीसँग विश्वासको निर्माण गर्नु अघि सम्झनुहोस्तपाईं उत्पादनहरु पिच शुरू र बिक्री चाहान्छ। प्राधिकरणले विश्वासबाट आउँछ, र यो तपाईले भविष्यमा बिक्री गर्न अनुमति दिन्छ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाई पाठकलाई के गर्न चाहनुहुन्छ। योसायद विरोधाभासपूर्ण आवाज हुन सक्छ, तर अध्ययनहरूले साबित गरेको छ कि कुनै व्यक्तिलाई यसो गर्न को लागी केहि राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछकेहि गर्न माग्दै "1-on-1 कोचिंगको लागि साइन अप गर्नुहोस्" भन्दा बढी प्रभावकारी हुनेछ "के तपाईं 1-मा-1 कोचिंगको लागि साइन अप गर्न चाहनुहुन्छ?"
आशा छ, यो लेखले तपाईंलाई सिक्न मदत गर्नेछइमेल वा सूची निर्माण गर्ने बारेमा कुरा वा दुई। जान्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि तपाईं सुरु गर्न पर्खन सक्नुहुन्न। यो को होमहत्त्वपूर्ण महत्त्व छ जुन तपाईं यस कार्यमा सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँसँग कुनै संकुचन छ भने, संकेत गर्नुहोस् Semalt डिजिटल सेवाहरुत्यसैले हामी तपाईंको लागि चीजहरू स्पष्ट गर्नेछौं।
- nada appraisal boats